Waxyaabaha qarsoon iyo waxyaalaha qarsoon, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Diimaha jaahilka ah, waxyaalaha qarsoon waxay ahaayeen qarsoodiyo kuwa keliya oo loo furay kuwa lagu soo rogay nidaamkooda cibaadada. Waxyaabaha qarsoon ayaa la sheegay inay iyaga siinayaan awood iyo awood ay ku saameyn karaan kuwa kale, waana inaan loo tusin qof kale. Xaqiiqdii looma baahin in si rasmi ah loo shaacin. Aqoonta noocan oo kale ah waxay ahayd khatar waxayna ahayd in lagu xafido si qarsoodi ah kharashyada oo dhan.
Ka soo horjeedda waa runta injiilka. Injiilka, waa sirta weyn ee waxa Ilaahay ku sameeyay iyo taariikhda aadanaha oo si cad oo xor ah loogu muujiyey qof walba halkii laga qarin lahaa.
Luuqadeena Ingiriisiga ah ee wadajirka ah, sirta ayaa qayb ka ah halxiraalayaal u baahan in la helo. Si kastaba ha noqotee, Kitaabka Quduuska ah, wax qarsoon ayaa ah wax run ah, laakiin ah in maanka aadanuhu uusan awoodin inuu fahmo ilaa uu Ilaahay soo shaacbixinayo.
Bawlos wuxuu ku sharaxayaa waxyaalahaas oo dhan inay yihiin waxyaalaha qarsoon ee la qariyay wakhtigii ka hor Masiixa, laakiin si buuxda loogu muujiyey Masiixa - qarsoodiga iimaanka. (1 Timoteyos 3,16), sirta ku jirta carqalada Israel (Rooma 11,25), sirta qorshaha Eebbe ee aadanaha (1 Korintos 2,7), taas oo lamid ah sirta doonista Eebbe (Efesos 1,9) iyo qarsoodiga sarakicidda (1 Cor.15,51).
Markuu Bawlos si cad ugu dhawaaqay sirta, wuxuu qabtay laba shay: Marka hore, wuxuu sharraxay in waxa lagu soo jeediyay axdigii hore inuu run ka noqday axdiga cusub. Marka labaad, wuxuu ka soo horjeeday fikirka qarsoodiga ah wuxuuna sheegay in qarsoodiga Masiixiyiintu uu yahay wax la muujiyey oo la muujiyey, oo la faafiyey, loo wada wacdiyey qof kasta oo ay rumaysteen quduusiintu.
Kolosay 1,21: 26-1,22 wuxuu ku qoray: Xataa kuwiinnan shisheeyaha ahayn oo cadow xun ku jiray, 1,23 wuxuu haatan la heshiisiiyey dhimashadii dhimashadiisa, si uu isagu quduus u noqdo oo aan eedla'aan lahayn oo uu wejigiisa u hoyan karo site; 1,24:1,25 hadaad ku sii nagaadid iimaan, aasaas iyo adag, oo aadan ka noqon rajadii injiilkii aad maqashay oo lagu wacdiyo uunka samada ka hooseeya oo dhan. Anigoo Bawlos ah waxaan noqday addoonkiisii. 1,26 Haddana waxaan ku faraxsanahay silica aan kuu qabo oo aan jidhkayga ugu abaal guday wixii weli uga dhiman silcyadii Masiixa, jidhkiisuna waa kaniisadda. Waxaan noqday addoonkaaga Ilaah, oo aniga i siiyey, oo ah sidii uu igu siiyey inaan eraygiisa aad iyo aad u badan, oo ah kaas oo ahaa qarsoodigii weligiis qarinayay weligiis iyo qarni kasta, laakiinse haatan waxaa loo muujiyey quduusiintiisa. ,
Ilaah baa ina yeeraya oo na faraya inaan isaga u shaqayno. Shaqadeenu waa inaan ka dhigno boqortooyada Ilaah aan la arki karin iyadoo loo marayo nolosha Masiixiyiinta ah ee aaminka ah iyo maragga. Injiilka Masiixu waa injiilka boqortooyadii Ilaah, oo ah warka wanaagsan ee caddaaladda, nabadda iyo farxadda ee Ruuxa Quduuska ah iyada oo loo marayo iskaashiga iyo xer ka wada yeelashada Rabbigeenna nool iyo Badbaadiyeheenna. Looguma talogelin in sirta loo dhigo. Waa in lala wadaagaa qof walba laguna ogeysiiyo qof walba.
Bawlos wuxuu sii wadaa: ... kan Ilaah doonayay inuu ogeysiiyo waxa hodanka ah ee ammaanta leh ee qarsoodigan ku dhex leeyahay dadka aan Yuhuudda ahayn, oo ah Masiixa idinku dhex jira, oo ah rajada ammaanta. 1,28:1,29 Waxaan baadhaynaa oo waan ku waaninaynaa dadka oo dhan oo waxaan dadka oo dhan wax ku barinnaa xigmad oo dhan, si aan nin kasta ugu sarraysiiyo Masiixa. Taas ayaan u halgamayaa oo u dadaalaa xoogga kan itaalkiisa xoogga leh (Kolosay 1,27-29).
Injiilku waa farriin ku saabsan jacaylka Masiixa iyo sida uu isagu keligiis nooga xoreeyo dambiga una beddelo u ekaanta masiixa. Siduu Bawlos warqad ugu qoray kaniisadda Filibiin: Xuquuqdayagu waxay ku jirtaa jannada; Meel kasta oo aan ka filayno Badbaadiye, Rabbi Ciise Masiix, 3,21 inuu beddelo jidhkeenna aan waxtarka lahayn, inuu dhaqso u noqon doono jidhkiisa ammaanta leh xagga xoogga uu wax walba ugu adkaysan karo. (Filiboy 3,20-21).
Runtii injiilku waa wax la xuso. Dembiga iyo dhimashadu naga fogaan mayso Ilaah. Waa in la beddelaa. Jidhkeenna ammaanta leh ma qudhmi doonaan, uma sii baahan doonaan cunto, ma gaboobi doonaan ama ma duugoobi doonaan. Waxaa laygu soo kicin doonaa sidii Masiixa oo kale jir jireed xoog leh In kabadan taasi wali si rasmi ah looma oga. Siduu Yooxanaa qoray: Gacaliyeyaal, hadda waxaan nahay carruurta Ilaah; laakiin waxa aannu noqon doonnaa weli lama muujin. Laakiin waxaan ognahay haddii ay muuqato, inaan noqon doonno isaga oo kale; maxaa yeelay waxaan isaga ku arki doonnaa isaga siduu yahay (1 Yooxanaa 3,2).